Dr. Aymen Al Dawaahiri Oo Jeedinaya Kalimaddiisi Ugu Horraysay Tan iyo Markii Madaxweyne loo doortay Donald Trump.
Thursday January 05, 2017 - 08:06:40 in Wararka by Super Admin
Hoggaamiyaha Guud ee Urur Weynaha Al Qaacidda Dr. Aymen Al Dawaahiri ayaa jeedinaya Kalimad Maqal ah oo uu uga hadlayo arrimo muhiim ah.
Mu’asasada Al-saxaab oo ah garabka warbaahineed ee Ururka Al Qaacidda ayaa ballan qaaday in ay soo gudbin doonto kalimad cusub oo uu jeedinayo Al Zawahiri.
Kalimadda oo ciwaan loogu dhigay لغير الله لن نركع ayaa lafilayaa in ay taabato arrimo xasaasi ah oo kajira caalamka islaamka gaar ahaan mandiqadda Shaam oo bilihii lasoo dhaafay isbedello siyaasadeed ka dhacayeen.
Al Qaacidda ayaa dagaal 15 sana jirsaday kula jirta dowladda Mareykanka iyo xulufadiisa, gummaadka ay dowladaha Ruushka iyo iiraan ka wadaan dalka Suuriya ayaa ah qadiyadda ugu muhiimsan ee wadamada caalamka islaamka marka laga reebo gummaadka waxashnimo ee dowladda Baarma ku hayso muslimiinta Rohiingga ee la baa’binayo.
Sidoo kale kalimadda Zawaahiri ayaa imaanaysa xilli isbedel weyn oo dhanka maamulka ah uu ku yimid dalka Mareykanka oo uu madaxweyne ka noqday Donald Trump kaasi oo kusoo baxay doorashooyinkii madaxtinimada, iyadoo la ogyahay in Xisbiga Jamhuuriga uu iclaamiyay dagaalka ka dhanka ah Muslimiinta sanaddii 2001.
Koongada Dimuquraadiga ah oo Madaxweyne Cusub yeelatay.